Ukuphupha i-Panda Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iipandas ziyinxalenye yosapho lwebhere. Zifumaneka ekhaya kwimimandla eyahlukeneyo yase China, kodwa ezinye iipandas zihlala ekuthinjweni kumyezo wezilwanyana kweli lizwe. Olona phawu lwaziwayo nolwaziwayo lwepanda ngumbala omnyama nomhlophe woboya bayo. Oku kuyibeka ngaphandle kwezinye iibhere kwaye ichongwa ngokulula njengepanda kubantu abaninzi.
Kodwa asinakukuncoma iipanda ezihlala kumyezo wezilwanyana kubomi bokwenyani, kodwa ziyavela kumaphupha ethu amaxesha ngamaxesha. Ngamanye amaxesha oku kuyenzeka xa besisandula ukuya kumyezo wezilwanyana ebomini kwaye sabona ipanda apho. Nangona kunjalo, isilwanyana sihlala sinentsingiselo efuziselayo edlula ngaphaya kokuqhubekeka kwamava okwenyani. Eyiphi?
1 Uphawu lwephupha «Ipanda» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Ipanda» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «panda» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Ipanda» - ukutolikwa ngokubanzi
Iipandas zizodwa, oko kuthetha ukuba iibhere azihlali eluntwini, kodwa zikhetha ukuhlala kwindawo ezinobungakanani obuthile. Ngale nto engqondweni, ipanda inokusebenza njengophawu lwephupha. Iingxaki khomba kubudlelwane phakathi kwabantu.
Nabani na obona enye yezilwanyana ephupheni, ngokwembono ngokubanzi, ubunzima ekuvuleleni abanye. Ngokunokwenzeka ukuphupha akuziva ekhululekile xa ekunye ngokusisigxina kwinkampani. Ngokusisiseko olu khetho kutheni Ukuba ndedwa Ayibalulekanga, kodwa umntu ekuthethwa ngaye kufuneka alumke angabinasithukuthezi ekuhambeni kwexesha. Kukho amaxesha ebomini apho naye axhomekeke kwinkxaso yoontanga bakhe kunye nokhuseleko lwesangqa sabahlobo.
Iphupha apho ubona iipandas ezininzi zinokuba luphawu lwamandla. Uxinzelelo lokhuphiswano ukuba. Ukuphupha kufuneka kulinganiswe rhoqo kubomi bokwenyani nabanye, ngakumbi kwicandelo lobungcali. Oku kufuna amandla amaninzi kuwe. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba ayiloxesha lokuba uthathe ikhefu kwaye uphumle kancinci.
Uphawu lwephupha «Ipanda» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha, zonke iintlobo zebhere zingumqondiso we amandla ababhinqileyo. Ngesi sizathu, iipandas zikwabonakala ngokukodwa kumaphupha endoda. Isilwanyana sibonisa indlela umntu ekuthethwa ngaye ajongana ngayo nabasemagunyeni ababhinqileyo kunye nendlela oku okungachaphazeli kuphela ubomi bakhe bemihla ngemihla, kodwa kwanokunxulumene neqabane kunye nesini. Intsingiselo ngqo ixhomekeke kwiimeko ezithile, kunye neemvakalelo ezivakalayo ephupheni.
Ngenxa yombala omnyama nomhlophe woboya kunye nendawo yokuhlala yamaTshayina, ngokutsho kwezinye iingcali zengqondo, ipanda nayo inokuhambelana. ibhalansi umele:
Ukulinganisela okuhle nokubi kubomi bomntu ochaphazelekayo. Uziva ngokwengqondo evisisana naye kwaye ke ngoko akaphulukani nokuphola kwakhe nakwiimeko ezinzima okanye xa ejongene neengxaki. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba iphupha le-panda lavakala ukuba limnandi kwaye alikhange livuse iimvakalelo ezimbi.
Uphawu lwephupha «panda» - ukutolika kokomoya
Ngokwendlela yokomoya, ipanda luphawu ephupheni. Amandla, Ibhalansi namandla.